Ali Mohyadin – Page 3 – Warfaafiye:
Puntland oo ku dhawaaqay diyaargarow dagaal oo ka dhan ah Somaliland
Ali Mohyadin May 19, 2018 0
Gollaha Wasiiradda ee dowladda Puntland ayaa maanta yeeshay shir aan caadi ahayn, kaasi oo looga hadlay xaaladda gobolka Sool iyo dagaalkii 15-kii bishan ka dhacay deegaanka Tukaraq. Kulanka oo uu shir gudoomiyay Madaxweyne Cabdiweli Gaas…
Wasiirad kafishtay wada hadal u socda Kenya iyo Somalia ee muranka badda
Wasiirka arrimaha Dibada ee Kenya Haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma, ayaa waxay daboolka ka qaaday inuu hada soconayo wadahalo qarsoodi ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalkeeda oo ku saabsan muranka dhanka Badda. Soomaaliya ayaa ku…
Jubbaland oo xirtay sarkaal ka hadlay gabar ay dileen Liyuu Boolis
Laamaha amaanka Jubbaland ayaa Xabsiga u taxaabey Sarkaal ka tirsanaa ciidanka Daraawiishta maamulkaasi, kadib markii uu si kulul uga hadlay dil loo geystay Gabar Soomaaliyeed. Dilkan loo geystay gabadhan, oo lagu magacaabi jiray Taysiir…
Majid Majid oo ah wiil asalkiisu Soomaali yahay kana soo jeeda deegaanada Somaliland ayaa wuxuu galay taariikhda dalka Britain kadib markii loo doortay Duq Sharafeedka Magaalada Sheffield ku yaala Koonfurta dalka Ingiriiska. Wuxuu ka tirsan…
Maxaa ka taqaan Soomaaligii gacanta ka geystay sii deynta Mandela
Xabsigii mudada dheer la galiyay Nelson Mandela ayaa ahaa dhacdadii ugu weyneyd Afrika qarnigii lasoo dhaafay, iyada oo maalinkii laga siidaayay xabsi ku yaala magaalada Cape Town uu ahaa warkii ugu weynaa ee xilligaas dhacay. Balse…